China 50ml 75% Alcohol Disinfectant TECH-BIO ifektri abakhiqizi | Zhongrong
Ngaphansi kwethonya le-covid-19, i-75% yotshwala-magciwane yotshwala iba yisidingo sethu sokuzinakekela empilweni yethu yansuku zonke ikakhulukazi kwezinye izindawo zomphakathi ezinjengezikole, isibhedlela, isitolo esikhulu, ihhotela, njll. Lo mkhiqizo uqukethe i-75% yotshwala engabulala i-coronavirus nokunye amagciwane ukuze aqaphe impilo yethu kahle kakhulu. Iphakethe le-50ml liphatheka kalula, ungalifaka esikhwameni sakho noma esikhwameni sokuhamba lapho usohambweni, ulisebenzise noma kunini, noma kuphi. Njengoba sikhiqiza utshwala obuhlaza, intengo yethu izoncintisana kakhulu futhi ibe nekhwalithi ephezulu. Ngaphandle kwalokho, sidlulile ukuqinisekiswa kwe-CE, FDA, ne-ISO. Sethule umkhiqizoI-TECH-BIO ukuyenza ibe ngu-1 brand yemikhiqizo yokubulala amagciwane eChina njengoba sinotshwala obusezingeni eliphakeme eChina. Singumholi eChina kubuchwepheshe be-ethanol. Sine cishe 500,000 square metres workshop endaweni esifundazweni Hebei, China. Inkampani yethu yasungulwa ngo-1999. Ngibheke phambili ekubeni ngumlingani wakho womhlaba wonke futhi ufeze isimo sokuwina!
I-Net Volume: 50mL
Idizayini enhle kakhulu yokupakisha lapho uhambela ngaphandle. Futhi kulula kakhulu ukucindezela ikhanda lepompo, lingasebenza ezintweni eziningi ikakhulukazi kumakhalekhukhwini, i-laptop, njll. Ezithintwa kalula ngabantu ukwenza ukubulala amagciwane nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi. Isifutho singaqina ngamandla ngemizuzwana emi-3 emoyeni, asikho isidingo sokukhathazeka kakhulu ngokusha, kepha gcina kude nomlilo noma ikhishi.
Langaphambilini Ama-75% Otshwala Obulala Amagciwane ku-IBC / Drum
Olandelayo: Isicoci Sandla se-OEM